ကားမှတ်တိုင်မှာ သတိထားစရာ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ကားမှတ်တိုင်မှာ သတိထားစရာ…
Posted by Hein Thu on Aug 24, 2010 in News | 15 comments
အိမ္ျပန္စရာပင္ ကားခမရွိေတာ့ေၾကာင္း ၊ တတ္နိုင္ပါက ကားခ ကူညီပါရန္ ေျပာပါတယ္။ သူ႔အဆင္ အျပင္က သားနားနား ရွိသေလာက္ သူ႔မ်က္ႏွာက ေတာ္ေတာ္ေလး ညိွုဳးငယ္ေနပါတယ္။ အဲ့ဒီ့မွာ တစ္ေယာက္က စေျပာတာ ပဲ ။ အဲ့ဒါ လိမ္သြားတာတဲ့ ။ တကယ္မဟုတ္ဘူး တဲ့ ။
ပြီးခဲံတဲ့ တစ်ပတ်လောက်က ကျောင်းကခိုင်းလို့ မြို့ထဲကို ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းက တစ်ပတ်တစ်ခါမှ အပြင် ထွက်ရတာဆိုတော့ အပြင်ထွက်ရတဲ့ ရက်ဆိုရင် အိမ်ပဲ ပြန်ဖြစ်တာ များပါတယ်။ မြို့ထဲကို မရောက်ဖြစ်တာတောင် တော်တော် ကြာပါပြီ ။ ကျောင်းက ခိုင်းတာလုပ်ပြီးတော့ နေ့လည် ၁၁ နာရီလောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ် ။ အဲ့ဒါနဲ့ ကျောင်းကို ပြန်မဝင်သေးဘဲ အိမ်ပြန်မယ်ဆိုပြီး လှည်းတန်းကားဂိတ်မှာ မင်္ဂလာဒုံ ဘက်ပြန်မယ့် ကားကို စောင့်နေခဲ့ပါတယ် ။ တနင်္ဂနွေရုံးပိတ်ရက်ဆိုတော့ လှည်းတန်းကားဂိတ်မှာ လူတော်တော်များ ပါတယ် ။
ကျွန်တော်ကားစောင့်နေတုန်း သားသားနားနား ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ (အသက်ကတော့ ၄၅ နှစ်လောက်ရှိမယ်ထင်တယ် ) လူကြီးတစ်ယောက် ကျွန်တော့်နား ရောက်လာပါတယ် ။ ပြီးတော့ကျွန်တော့်ကို ပြောပါတယ် ။
သူ က သာကေတ မှ ဖြစ်ကြောင်း ၊ သူ့ ဆိ်ုင်အတွက် လိုအပ်တာတွေလာဝယ်ရင်း ခါးပိုက်နှိုက် ခံလိုက်ရကြောင်း ၊ ပိုက်ဆံ ခြောက်သောင်း ခန့် ပါသွားကြောင်း ၊ ယခု အိမ်ပြန်စရာပင် ကားခမရှိတော့ကြောင်း ၊ တတ်နိုင်ပါက ကားခ ကူညီပါရန် ပြောပါတယ်။ သူ့အဆင် အပြင်က သားနားနား ရှိသလောက် သူ့မျက်နှာက တော်တော်လေး ညှိုုးငယ်နေပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်းသနားပြီး ငွေ သုံးထောင် ကူညီ လိုက်ပါတယ်။ သူ့ခမျာ ကျွန်တော်ကို ကျေးဇူးတင်လွန်းလို့ ကျေးဇူးတင် စကား အထပ်ထပ် ပြော ရှာပါတယ်။
အဲ့ဒီ့ အထိကို ပြသနာ မရှိသေးဘူး ခင်ဗျ ။ အဆောင် ပြန်ရောက်မှ ပြသနာက စတာ။
လူဆိုတာလည်း သိတယ်မဟုတ်လား…ကိုယ့်ကောင်းတာလုပ်တော့ ကြွားချင်တာပေါ့ ..။
အဲ့ဒါ နဲ့ ဒီ အကြောင်းကို အဆောင်က သူငယ်ချင်း တွေကို ပြောပြလိုက်တယ်။
အဲ့ဒီ့မှာ တစ်ယောက်က စပြောတာ ပဲ ။ အဲ့ဒါ လိမ်သွားတာတဲ့ ။ တကယ်မဟုတ်ဘူး
တဲ့ ။ သူလည်း လှည်းတန်းမှာ တစ်ခါ ကြုံ ဘူးတယ်တဲ့ ။
ကျွန်တော်ကလည်း မဟုတ်လောက်ပါဘူး ဆိုပြီး ပြန်ငြင်းတာပေါ့ ဟုတ်တယ်လေ.. တကယ်မဟုတ်ရင် အခြားသူကို အားနာစရာ…။
အဲ့ဒီလိုနဲ့ ငြင်းကြ ခုန်ကြတာပေါ့ဗျာ…အဲ့ဒီမှာ နောက်ထပ်သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်က
သူတို့လည်း မြေနီကုန်း ကားဂိတ်မှာ အဲ့လို ကြုံဖူးကြောင်း ပြောပါတယ် ။နောက်တစ်ယောက်
ဆိုလည်း ထိုနည်း အတိုင်းပဲ ။ သူက ကျတော့ ရှစ်မိုင်မှာ ။
ကျွန်တော်လည်း တော်တော် အံ့ဩ သွားတယ်။ အရင်က ကားမှတ်တိုင်မှာကလေး
ပေါက်စလေးတွေ ၊ ကလေးမွေးကင်းစ လေးတွေနဲ့ မိန်းမတွေ ထမင်းဖိုးပေးပါ ၊ ဘာညာ ဆိုပြီး ရိုးရိုးသားသား တောင်းကြတာတွေ့ ဖူးပါတယ်။ အခုလိုမျိုး ဟန်တစ်လုံး ပန်တစ်လုံး နဲ့
လုပ်စားတာတော့ တစ်ခါမှ မကြုံ ဘူးပါဘူး။
အခု လို လုပ်တာ ဟာ တောင်းတာမဟုတ်တော့ပါဘူး…။လိမ်လည်မှု့ ဖြစ်သွားပါပြီ ။ ကျွန်တာ်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ ကိုယ့်ထက်အားနည်းတဲ့ သူ ဆိုရင် ကူညီတတ်ကြပါတယ် ။ မတရားတာမြင်ရင်လည်း ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်ရင်တောင်မှ ရှောင်မထွက်သွားပဲ ဝင်ကူညီတတ်ကြပါတယ် ။ ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်း လမ်းဘေးမှာတောင်းနေတဲ့သူတွေ ဆိုရင် တတ်နိုင်သလောက် ကူညီတာပါပဲ။
ဒါပေမယ့် အထက်ကဖော်ပြခဲ့သလိုမျိုး လူမျိုးတွေကြောင့် ကိုယ့်စေတနာ က သိပ်မသန့်ချင်တော့ဘူး ။ ငါ ကူညီလိုက်တဲ့ သူဟာ လူလိမ်များ ဖြစ်နေမလားဆိုပြီး သံသယ ဝင်တတ်ပါတယ် ။ အဲ့လို သံသယ ဝင်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့စေတနာ ဟာ မသန့်တော့ပါဘူး ။ ကုသိုလ်ထက် အကုသိုလ် က ပိုများသွားပါတယ် ။
အဲ့လို မျိုး အဆင်အပြင် ကို ဗန်းပြပြီး လိမ်စားတာတွေ ဟာ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်များလာပါတယ်။ အဖြစ်များတာကတော့ လူစည်ကားရာနေရာ တွေ ၊ လူ စည်ကားတဲ့ ကားမှတ်တိုင်တွေ ဖြစ်ပါတယ် ။
များသောအား ဖြင့် ကျောင်းဆင်းချိန် ၊ ရုံးဆင်းချိန်တွေ မှာ အဖြစ်များပါတယ် ။ဒါကြောင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူ များ ၊ မိဘပြည်သူများအနေဖြင့် အထူးသတိထားကြ စေလိုပါတယ် ။ လူတိုင်းကို မယုံပါနှင့် ။ လူကောင်းလား လူလိမ်လား ဆိုတာ ကိုသေသေချာချာ ခွဲခြား ကြစေလိုပါတယ် ။
စေတနာ သည်လူတိုင်းနှင့် မတန်ပါ ။ စေတနာကို ယူတတ်သူ ရှိသလို သူတစ်ပါး၏ စေတနာကို အလွဲ သုံးစားလုပ်နေကြသူများလည်းရှိပါ သည်။ ထိုသူများကြောင့် အခြား ရိုးရိုးသားသား သည့် သူများပါ တလွဲအထင်ခံရသည် ။
မိမိ ဝမ်းဝရေးအတွက် သူတစ်ပါး ထမင်းအိုးကိုပါခွဲသည့် သဘော ပင်…။ငါးခုံးမတစ်ကောင်ကြောင့် တစ်လှေလုံး ပုပ်ရ သကဲ့သို့ဖြစ်နေပါသည် ။
ထို့ကြောင့် ကျောင်းသားလူငယ် မိဘပြည်သူများအနေဖြင့် သတိပြု ရှောင်ရှားနိုင်ကြရန် တင်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စာရေးသူ ၏ ကိုယ့်တွေ့ ဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။
ဟုတ်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း ရန်ကုန်က ကားမှတ်တိုင်တွေမှာ အဲဒါမျိုးတွေ အတော်များများ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
တခါတလေ ကိုယ်က သနားလို့ ကူညီလိုက်ပြီးတော့ နောက်နေ့တွေမှာလဲ အဲဒီလူကို အဲဒီနေရာမှာ ထပ်တွေ့ရတော့ စေတနာ တော်တော်ပျက်ရပါတယ်။
အခုခေတ်မှာ လိမ်လည်တောင်းစားသူတွေ ဆိုပြီး သူတောင်းစား နောက်တစ်မျိုးတောင် ပေါ်ပေါက်နေပြီ ထင်ပါတယ်။
အဲဒါဆိုရင်တော့ အမှန်အကန် သူတောင်းစားတွေအတွက် အချောင် နာမည်ပျက် ရဦးတော့မယ်။
နောက်ဆိုရင် သူတောင်းစား လက်မှတ်တို့ သူတောင်းစား လိုင်စင်တို့တောင် လုပ်ပေး ရတော့မယ် ထင်တယ်။
ကျနော်ကြားဖူးတာကတော့ အချို့နိုင်ငံတွေမှာ ဆိုရင် အဲလို လူနားကို ကပ်ပြီး ပေးပါကမ်းပါ လို့တောင် တောင်းခွင့် မရှိဘူးလို့ ဆိုတယ်။
ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပလက်ဖောင်းဘေးမှာ ငွေထည့်စရာ တစ်ခုခု ထားပြီး တီးမှုတ်သီဆို တတ်တဲ့သူ ဆိုရင်လည်း ကိုယ်ကျွမ်းကျင်ရာ အလျောက် လုပ်ပြပြီး တောင်းရတယ်တဲ့။
အဲလိုဆိုတော့လည်း သူတောင်းစား အိန္ဒြေ ရတယ်လို့ ပြောရမလိုပဲ ……..
ဟုတ်တယ် etone လည်းကြုံဖူးတယ် ဆေးရုံကဆင်းတာဆိုပြီးလာတောင်တာ သိသိချည်းဘယ်လိုလုပ်စေတနာထားပြီးပေးရပါ့မလဲနော် ။ ဒီနေ့လည်း ဒီနေ့ရာမှာ နောက်တစ်ပတ်လောက်လည်းဒီနေရာမှာပဲ ။ လူတွေလက်ခြေတွေကောင်းရက်နဲ့ စာရိတ္တပျက်ကုန်ပြီလား။
သူတို့လည်း ဦးနှောက်တွေတိုးတက်လာပြီပေါ့ … ကြာရင်ကမာ္ဘကမြန်မာကို ဆရာတင်ရတော့မယ်ထင်မယ်နော် …. လိမ်တာတော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ … ရဲတွေခေါ်ပြီးဖမ်းခိုင်းဗျာ …
အိမ်တွေမှာတောင် သမီးပျောက်တယ်ဆိုပြီး လာရှာ ..ပြီးတော့ လုယူေနေတာတွေတောင်ရှိပါတယ်
တိုက်ခန်းနဲ့နေရင်တောင် အောက်က တံခါး သော့မခတ်ရင် တက်ချင်သလိုတက်ပြီး လိုက်တောင်းနေတာ များပါတယ်
လိမ်တာမှန်း သိသိချည်းနဲ့ သနားပြီး ပေးကမ်းလိုက်တဲ့ လူတွေလည်းရှိသေးတယ် . .
ကျုပ်ဆို လာတောင်တဲ့သူက ဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ မပေးဘူးပဲ သူဟာသူ ကျောက်ရုပ်လို အနားကမခွာလို ့ထိုင်ပဲရှစ်ကြီးပဲ ခိုးခိုး ဒါပေမဲ့ စိတ်ထဲက(ပျော်နေရင်) ပေးချင်နေရင်တော့ဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ ပေးပလိုက်တယ် (လူရည်သန် ့တောင်စားသူမပါ) နိုင်ငံခြားမှာ ဆို (ရထားဘူတာဝင်ပေါက်မှာ) ကိုကပေးရင်တောင်ဘေးကလူတွေက မကြိုက်ဘူး မျက်စောင်းကြီးတွေ နဲ ့ပေးစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ အဲဒီလိုငွေ ပေးချင်ဟာ သူတောင်စားတွေအတွက် သက်ဆိုးရှည်စေပါတယ်
Hote tal naw Eilay lal toe bu par tal …eilay ka ma yone loe ma pay lide bu …thati pay tar kaung tar poe naw…..thank par naw…………:)
ရေသာခို အချောင်သမားတွေ… သူရို့ရဲ့ ခွန်အားဗလ ကြီးတွေကိုမှ အားမနာ… မုန်းထှာ…
Hein Thu ရယ်… သူပြောကတည်းက ဆိုင်အတွက်ပစ္စည်းလာဝယ်ရင်း ခါးပိုက်နှိုက်ခံရလို့ ပိုက်ဆံ 6သောင်း ပါသွားတယ်ဆိုရင် …စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပေါ့…. တကယ်ဆို “ကားငှားသွားလိုက်…အိမ်ရောက်မှကားခပေး လိုက်ပေါ့….” အဲလိုတွေးကြည့်ရင် သူ့ကိုပေးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး…. ကိုယ့်အိတ်ထဲက ပိုက်ဆံ 3000 လောက် ထွက်သွားတာ ဟိန်းသူအစား နှမြောလိုက်တာ…. အမကတော့ တော်ရုံတန်ရုံ မပေးဖြစ်ဘူး…. ဆူးလေ ( ပန်းဆိုးတန်း၊လမ်း30) ဝန်းကျင်မှာ ကောင်မလေး2ယောက်လောက်အမြဲလိုက်တောင်းတာရှိတယ်… အသက်က 12 နှစ်ဝန်းကျင် လောက်ရှိမယ်။ အမကိုတွေ့ရင်မတောင်းရဲဘူး… အမက သူတို့ကိုပြောထားဘူးတယ်… ကလေးတွေကိုတောင်းစားခိုင်းရင် ခိုင်းတဲ့လူကိုရဲကဖမ်းလိမ့်မယ်…ဘယ်သူ တောင်းခိုင်းတာလဲလို့ မေးလိုက်တာ တစ်ချိုးတည်းလစ်ရော…. သနားပေမယ့် ပေးမှန်းသိရင်အကျင့်ပါပြီး တစ်သက်လုံးတောင်းစား ဘဝပျက်မှာ….
တွေ့ပါများပီ …ခံရပေါင်းလဲများပီ …
ပြောတော့ပါဘူးအေ …. မျက်မမြင် အကန်းအယန်းတို့ရဲ့ ဒါနလေး ပျောက်သွားမှာစိုးလို့ ….